अन्तरवार्ता – Page2– Banking Khabar
सहकारीमा प्रविधिको विकास हुनुपर्छ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रविधिमा प्रतिपर्धात्मक तवरले अगाडी बढिरहेको बेला सहकारी संस्थाहरुले पनि प्रविधिको प्रयोगतर्फ सोचेका पनि छैनन् । सहकारी विभागले त सहकारी संस्थाह रुमा प्रविधिको खासै अ आवश्यकता नपर्ने समेत जनाएको छ । सहकारीका सदस्यहरु थोरै हुने भएकाले प्रविधिको …
विग मर्जरको आवश्यकता बैंकले ठुला परियोजनामा लगानी गर्न सकुन् भन्ने हो
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति आउँदैछ । मौद्रिक नीतिमा यसपाली नयाँ के आउँला भन्ने विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ । संघीयतापछिको पहिलो मौद्रिक नीति आउन लागेको छ । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकलाई चुनौति थपिएको छ । त्यसमाथि, बैंकिङ …
राष्ट्र बैंकले व्याजदर व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने क्रममा छन् । केही दिनमा नै आउन लागेको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाहरुले आआफ्नै किसिमका सल्लाह र सुझावहरु दिएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा व्याजदरको समस्याले विकराल रुप लिइरहेको छ । यसबाहेक पनि थुप्रै पक्षहरु …
‘बैंक र माइक्रोफाइनान्सको प्रतिष्पर्धा हुँदैन’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यमशीलता विकासका साथै गरिबी न्युनिकरणमा समेत उल्लेखनीय सहयोग पुर्याएका छन् । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सदुपयोग गर्नेहरु आज सुखी जीवन किताइरहेका छन् । यद्यपि, कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै जाँदा लघुवित्त क्षेत्रमा चुनौति थपिएको …
‘बैंकिङ कसुरमा कडाई गर्नुपर्छ’
गान्धी पण्डित कर्पोरेट कानून व्यवसायी हुन् । गान्धी एण्ड एशोसियट्सका अध्यक्ष समेत रहेका पण्डित कर्पोरेट कानून सम्बन्धी विज्ञ मानिन्छन् । पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रमा विभिन्न अपराधहरु मौलाउँदै गएका छन् । घर–जग्गा कारोबारदेखि लिएर बैंकिङ क्षेत्रमा समेत अपराधिक गतिविधिहरु मौलाउँदै गएको …
प्रदेश नं. ७ मा वित्तीय पहुँच विस्तारको आवश्यकता
तीन जिल्ले विकास बैंकको दायरा सिमित छ । तीन वटा जिल्लाभित्र मात्रै काम गर्न पाउने भएकोले केहि बाध्यताहरु पनि छन् । जिल्लाभन्दा बाहिरका ग्राहकलाई आकर्षित गर्न असहज छ भने ठुलोे नेटवर्कमा सेवा प्रभाव गर्न असहज छ । यसै बीच कैलाली, …
बीमा क्षेत्रमा झन्डै चार दशक बिताएका नुर प्रकाश प्रधान लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनी २०३६ सालमा बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । करिअरको सुरुवातको आठ वर्ष उनले नेशनल इन्स्योरेन्समा काम गरे । त्यसपछि २०४४ सालमा …
‘कमर्शीयल भन्दा कम छैनन् डेभलपमेन्ट बैंकहरु’
रेशमबहादुर थापा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका सचिव एवं गण्डकी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । २०५१ साल पौष १ गते कैलाश विकास बैंक (साविकको अन्नपूर्ण फाइनान्स) बाट बैंकिङ करियर शुरु गरेका थापाले दुई दशकभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन् …
बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न फाइनान्स कम्पनी सक्षम छन्
गुडविल फाइनान्स कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो । गुडविल नेपालको पुरानो र अव्वल फाइनान्स कम्पनीहरु मध्येको एक हो । गुडविलले पछिल्लो समय बचत तथा लगानीमा आकर्षण गर्ने साथै वित्तीय चेतना बढाउने अभिप्रायले ‘आइएम एमबिए’ …
नेपालमा बीमाको इतिहास झण्डै ७ दशकको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बीमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको बीमा कम्पनीले बीमाको इतिहास रचेको थियो । त्यति बेला …
जर्मनीको सरकारी विकास बैंक (KFW Bank)सँग सहकार्य गरीरहेको राष्ट्रियस्तरको ओम डेभलमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्रदेश न. ५ को लमही(दाङ्ग), भैरहवा(रुपन्देही), मणिग्राम(रुपन्देही) तथा बर्दघाट(नवलपरासी)मा आफ्ना शाखाहरु औपचारीक रुपमा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले गतबर्ष बुटवलको पुष्पलालपार्कमा आफ्नो शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । …
‘विकास बैंकमा सरकारी खाता संचालन गर्न कार्यविधि बाधक छ’
संघीय संरचनाअनुसार बनेका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले जोड दिइरहेको छ । सोहीअनुरुप वाणिज्य बैंकहरुले शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । यो बीचमा बैंकिङ पहुँच नपुगेका स्थानमा विकास बैंकहरु पनि जाने कुरा उठेको थियो । …
अहिले बजारमा कर्जा लगानी गर्ने पूँजीको अभाव भएको बैङ्कर्सहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । यद्यपि, तरलताको कमी नभएको केन्द्रीय बैङ्कले टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन रिपो, ट्रेजरी बिल बोलकबोल, सोझै खरीद बोलकबोल (राष्ट्र …
माधव निर्दोष मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष एवं वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको मूख्य प्रवद्र्धन तथा बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ र माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघको सहकार्यमा गत वर्षदेखि मिडिया इन्टरनेसनलले देशव्यापी रुपमा वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन …
‘बैंकिङ क्षेत्रमा स्वर्णिम युग भित्रिँदैछ’
नेपालको जेठो बैंक नेपाल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरु गरेका कृष्णराज लामिछाने बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै लामो अनुभव भएका बैंकर मानिन्छन् । हालै महालक्ष्मी विकास बैंकमा सीईओको कार्यभार सम्हालेका लामिछानेले सबै कोणबाट महालक्ष्मीलाई नेपालको नम्बर वान विकास बैंकको रुपमा स्थापित गराउने आफ्नो …